Maxaa looga hadlay kulankii maanta ee Golaha Shacabka? – Kalfadhi
Xildhibannada Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Soomaaliya oo maanta yeeshay kulankoodii caadiga ahaa ayaa ka dooday mar kale akhrinta 2-aad ee wax ka badalka Sharciga Xisbiyada Siyaasadda ee dalka Soomaaliya.
Xildhibannada ayaa dood adag ka yeeshay sharciga, waxaana ay talooyin kala duwan ay usoo jeediyeen Guddiga si ay ugu soo daraan sharciga kaddibna loo ansixiyay.
Xildhibaannada kala ah Maryan Haaruum, Zakariye, Askar, Gamacdiid iyo xildhibanno kale ayaa doodii maanta tallooyin kala duwan kasoo jeediyay, waxaana dhammaan ay codsadeen in talooyinkaasi marka la falanqeeyo kaddib lagu soo daro xeerka.
Baarlamaanka federaalka ayaa Arbacadii lasoo dhaafay bilaabay dooda akhrinta labaad ee sharciga axsaabta – oo dib loogu soo celiyay golaha. Sharciga Axsaabta, ayaa kamid ah shuruucda ku lugta leh doorashooyinka, madaama dalka Soomaaliya uu u gudbayo nidaamka xisbiyadda.
Doorashada Baarlamaanka Federaalka ayey tahay inay dhacdo dabayaaqada sannadkan, halka doorashada madaxweynahana ay ku beegan tahay bisha February ee sannadka xiga ee 2021-ka.